Madaxweyne Erdogan oo sheegay in hawlgaladda ka dhanka ah daacish ay sii socon doonan – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne Erdogan oo sheegay in hawlgaladda ka dhanka ah daacish ay sii socon doonan
Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa u balan qaaday in hawlgalada ka dhanka kooxda isu magacaawday khilaafada Islaamka ee isil iyo ciidamadda Kurdishka ah ee ka dagaalama waddanka Syria in ay ciidankiisa sii wadi doonan.
Ciidamada waddanka Turkiga ayaa waxa ay maalinta shalay ahayd maalintooda shanaad ee ay wadaan hawlgaladda ay xadka uga gudbeen kuwaas oo ay kula dagaalamaayan kooxda daacish iyo dagaalyahanada kurdishka ah.
Madaxweynaha ayaa hadaladaas jeediyay xili u ka hadlaayay magaalada Gaziantep ee ku taala koonfurta bari ee waddanka Turkiga halkaas oo isbuuci aanu ka soo gudubnay lagu dilay 54 ruux kuwaas oo joogay goob ay ka socotay xaflad aroos ah waxana dadkaas ay geeriyooden kadib marki u qof naftiis hura ah u halkaas isku qarxiyay.
Hay’ada u dooda xuquuqda aadanaha ee duusha kala socota xadgudubyada ka dhanka ah baniaadanka ee u fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 40 qof ay ku dhinteen gooba kala duwan duqeymaha dhinaca cirka ah ee u waddanka Turkiga ka wado waddanka Syria.
Hay’adan ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in duqeymahaas sidoo kale lagu dilay 4 dagaalyahan oo ka tirsan dagaalyahanada kurdishka ah halka 15 kalena ay ku dhaawacmen balse dawladda Turkiga ayaa beenisay eedeymaha loo jeediyay ee ahaa in ay dishay dad rayid ah iyado sheegtay in ay dishay oo kaliya 25 qof oo ah dagaalyahanada Kurdishka sida ay shaacisay warbaahinta ku hadasha afka dawladda Turkiga ee Anadolu.
← Dugsiyada dalka oo maanta dib loo furayo
Maxkamadda sare ee dalka oo ammar ku bixisay nin ka tirsanaan jiray ciidamada militariga in u bixiyo lacag dhan 30 milyan →